Fampiharana】 【Ascorbic asidra (vitamina C) anjara lehibe eo amin'ny sakafo / pharm orinasa, Nampiasaina be teo amin'ny Sakafo, zava-pisotro, SIRAMAMY, ronono.
Mpanao】 【Main CSPC / Luwei / DSM Jiangshan / Tianli / avaratra / Henan Lvyuan / Ningxia Qiyuan / Yuoyang
Fampiharana】 【Sodium Ascorbate (Na VC) dia manome 131 levitra ny ny sodium isaky ny 1000 levitra ny ascorbic asidra, be mpampiasa any Food / zava-pisotro / fanafody / Fahasalamana sy ny fikarakarana manokana.
Mpanao】 【Main CSPC / Luwei / DSM Jiangshan / Tianli / avaratra
】 【Application Sodium Erythorbate (Na VC) Sodium Erythorbate vovoka, miaraka amin'ny isan'ny E E316, sakafo antioxidant, be ampiasaina amin'ny ny hena, akoho amam-borona, ary ny zava-pisotro malefaka.
Mpanao】 【Main Baisheng / PARCHN
Ascorbic asidra Granular
Fampiharana】 【Ascorbic asidra (vitamina C) anjara lehibe eo amin'ny sakafo / pharm orinasa, nampiasaina tamin'ny sakafo be, omeo hanina orinasa
Kalsioma Ascorbate, vitamina C kalsioma (Ca VC)
Fampiharana】 【vitamina C Calcium Kamban-teny toy ny kalsioma sy vitaminina C, be mpampiasa in Heath fanampin-tsakafo, Lasopy sy Lasopy-karazana sakafo.
Mpanao】 【Main Ary Foods / DSM
Ascorbic asidra mifono 97% (mifono vitamina C)
Fampiharana】 【mifono vitamina C ny vitaminina C amin'ny fiarovana ara-batana coating izay misakana ny mpanao ny vitamina C singa avy amin'ny fahavoazana amin'ny alalan'ny anton-javatra manimba. vitaminina be mpampiasa fa mialoha mifangaro fahana, sarotra mialoha mifangaro fahana.
Mpanao】 【Main NCPC / CSPC / North East
Ascorbic asidra tsara vovoka (100 harato)